UPDATE: Reer Galmudug oo isha ku haya dhaqdhaqaaqyada ku soo kordhay Dhuusamareeb (Maxaa cusub)? | HalQaran.com
UPDATE: Reer Galmudug oo isha ku haya dhaqdhaqaaqyada ku soo kordhay Dhuusamareeb (Maxaa cusub)?
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Bulshada reer Galmudug ayaa isha ku haysa dhaqdhaqaaqyada ka soo cusboonaday Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug, tan iyo markii uu tagey Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Xasan Cali Khayre, maalintii Isniinta.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka soconaya kulamo uu Ra’iisal Wasaaraha Somaliya xal ugu raadinayo khilaafyada hareeyay geedi-socodka tallaabta 1aad ee doorashada, oo lagu soo xulayo Xildhibaanada Baarlamaanka.
Xasan Cali Khayre, Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ayaa Magaalada Dhuusamareeb kulamo kula qaadanayo dadka ay ka go’do Siyaasadda Galmudug, iyadoona uu ujeedku yahay in la dardar-geliyo dhismaha maamulka cusub.
Gobolada Dhexe ayaa waxaa tan iyo bishii June ka soo yeeraayay wararka liddiga ku ah habsami u socodka qorshayaasha maamulka lagu soo yegleelayo dadka reer Galmudug, khilaafkuna wuxuu ahaa mid dhasha, marba marka mid laga gudbo.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya, Cabdi Maxamed Sabriye ayaa Odayaasha Dhaqanka ee ku hawlan soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka ku wargeliyay inay u diyaar-garoobaan kulan ay la qaataan Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre.
Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa waxaa uu u muuqdaa mid u kabo gishtay, sidii uu u soo geba-gabeen lahaa foosha ku sii dheeraatay dhismaha maamulkan cusub.
Kulamada uu Khayre ka wado Xarunta Gobolka Galgaduud ee Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa barbar socda kulamo kale, oo ay magaaladaasi ku leeyihiin dhinacyada kale ee dowladda kula loomaya Doorashooyinka Baarlamaanka iyo midda Madaxtooyada.
Sidoo kale waxaa jira shirar kale oo magaalada uga socda haweenka iyo qaybaha kale ee bulshada, kuwaa oo la xiriira geedi-socodka doorashada. Haweenka ayaa dadaal ugu jira, sidii ay door muuqdo ugu yeelan lahaayen maamulka cusub ee dhawaan lagu wado in la soo dhiso.
Bashiir Nageeye oo ka mid ah dhalinta reer Dhuusamareeb ayaa Halqaran.com u sheegay in magaalada laga dareemay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee maalmihii la soo dhaafay ku soo kordhay, isla-markaana ay dadka reer Galmudug isha ku hayaan dhaqdhaqaaqyadaasi.
Doorashadan ayaa waxaa la sii saaadaalinayaa inay noqon doonto mid wax badan ka duwan doorashooyinkii hore ee lagu soo dhisay maamuladii soo maray Galmudug.